Muqdisho – Geelle Magazine
Ciidanka xoogga dalka Soomaaliya gaar ahaan ururka 143-aad ee guutada 14 October ayaa howlgal ka dhan ah Al-shabaab ka sameeyay tuulooyin hoostaga deegaanka Bariire ee Gobolka Shabeellaha hoose. Taliyaha Ururka 143 Aad ee Guutada 14 October Dhamme Axmed Xasan Siyaad […]
Xildhibaannada labada Aqal ee somaaliya ayaa manta ansixiyay heshiiski hanaanka doorashada dalka ee ay dhawaan gareen madaxda dowlada somaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah dowlada dhexe. Kulanka xildhibanaada laba aqal ee somaaliya waxaa soo xiidirey 255 xildhiban waxana goobjoog ahaa […]
Sii-hayaha wasiirka Gaashaandhigga Xukuumadda Soomaaliya,Taliya ciidanka xoogga dalka iyo saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga ayaa Ku dhawaad 300 (Saddex boqol) oo askari oo ka tirsan ciidanka kumaandooska kusoo dhaweeyay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde. Ciidankaan oo muddo tababar ku qaadanayay dalka […]
Ciidaanka Kumaandooska Soomaaliya oo kaashanaysa Ciidamada Africom ee Mareykanka ayaa howlgal lagu dilay xubno ka tirsan maleeshiyada AL-shabaab ku dilay gobolka Shabeelada Hoose. Howlgalkaasi oo ahaa duqeyn dhanka cirka ah ayaa lala beegsaday nawaaxiga magaalada Kuunyo Barrow, Duqeyntaas oo lagu […]
Wasiirka Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada XFS, Marwo Fowziya Abiikar Nuur ayaa xaqiijisay in la diiwaan geliyay 64 xaaladood oo COVID-19 ah, 4 qofood oo xanuunka ka boqsootay iyo 1 bukaan oo u geeriyooday. Marwo Fowziya Abiikar Nuur ayaa sheegtay in […]
Diyaarad gaar ah ayaa maanta garoonka diyaaradaha ee Adan Cadde ka soo qaaday 153 qof oo ku xayirmey magaalada kadib markii la joojiyey inta badanduulamaadyadii dunida, sababo la xiriira xanuunka Coronavirus. Dadkan ayaa ah Soomaali heysta dhalashada dalalka Mareykanka, Canada […]